Iinkqubo ze-13 ze-GIS ongazaziyo - i-Geofumadas
Iiprogram ze-GNUMX ze-GIS ongazi
NgoDisemba, 2011 Geospatial - GIS
Kwesi sithuba ndithethe ngeenkqubo ezininzi, ezidume njengalezo zophawu AutoDesk y ESRI, kunye nezo ezidumileyo kodwa ezinokuma okuhle njengoko zinjalo bentley, GIS asibonisekunye Uluhlu olupheleleyo lweenkqubo Phakathi kwezo zisandula ukubamba ingqalelo yam uMthombo ovulekileyo.
Kodwa ngaphaya koko kukho ezinye iinkqubo, ezingaziwayo, ubuncinci kwimeko yethu yokuthetha iSpanish. Olunye luluhlu lukwimo entle kwiMpuma Ekude. Apha ngasezantsi luluhlu kwaye ubonise enye yazo:
UGeokno, ulwazi lwe-geospatial
I-Geoconcept, i-Geomarketing kunye nenye into
IsupermapUluhlu olupheleleyo lweemveliso ze-ESRI
I-SuperGeo, isoftware ebekwe kakhulu empuma, mhlawumbi ingaphezulu kwe-ESRI
Zisixhenxe, isoftware yokukhangela kunye nemaphu ye-nautical
ScanEx, isoftware ye-topography, i-GIS kunye neenzwa zokude
Rockwoiirks, iJiology kunye nesoftware yophando
Ifoto, ekhethekileyo yokwenza i-Photogrammetry
I-EZSurv, ulwandiso kwiArcPad yokubuyisela idatha ngaphambi kokuba ifumaneke kunye nabamkeli beGNSS
I-Pythagoras, CAD, GIS kunye ne-VBA yokwandisa
I-Orbitgis, Izicelo zokulawulwa kwedatha yewebhu
I-Guthrie, iiNkqubo zokutshintsha kwedatha phakathi kwe-shp, dxf, pdf, hpgl ...
Lo ngomnye wale mizekelo, ncinci eyaziwayo kwimeko yangoku ye-GIS, apho iimpawu zokwenza isingqisho sobupopu ziba nemfashini. I-OCAD Yenye yezo zinto ezalelwa ngaphambi kokuba imeko yejogatial esikwaziyo ukuba iya kukhula ngoku, ngakumbi kwimfuno yokwenza uluhlu lweemveliso ezenziwe ngamaZiko eeNdawo ke ngoko isiqubulo sayo «I-Smart Cartography».
Ke esona sizathu sibalulekileyo sokucinga nge-OCAD kukuvelisa iimephu ezizakuphela kwifom eshicilelweyo.
I-OCAD ixhasa ukungeniswa kwedatha evela kwiShapefiles, iifayile ze-VXF zeVeter, IPP, Adobe Illustrator kunye neGeoTIFF. Emva koko, ezi zinto zidityaniswa kwindawo yazo enokuthi iqhagamshelwe kulwazi oluku-ODBC.
Mhlawumbi obunye bobutyebi obuxabisekileyo kwe-OCAD koko bakubiza ngokuba "yi-smart cartography," apho isicatshulwa, umgca okanye isitayela se-iyeurated sisisombululo sokwenyani. Le yinto into yokuba iinkqubo zangoku ze-GIS azinakuhlala zikuphumeza kuba azenzelwanga ukuba zivelise iimephu kodwa ukusebenzisana; kwakhona kuba ngokungafani neemephu zangaphambili, ezaziyimisebenzi yobugcisa eyinyani, iigrafiki zibonisa kuphela oko kungaphakathi kwiziko ledatha, kwiimeko ezininzi ngandlel ithile.
Nje ukuba imephu yenziwe ukuba ingcamle, ingathunyelwa kwiifomathi apho ivela khona (imilo, i-DXF, i-GeoTIFF), kodwa ukongeza kwiifomathi zokuprinta ezifana ne-EPS, PDF, AI, SVG. Kucacile ukuba ngaphaya koko kunokwenziwa ngeCorel Draw, i-OCAD yinkqubo ye-GIS, ixhasa ukungenisa idatha ye-GPS, i-roreferenced raster kunye ne layiste yeVeterator kunye nenguqu yeenkqubo zonxibelelaniso.
Nangona umjikelezo wayo ugxile kulwakhiwo lwedatha, ukuhlela nokupapasha, kakhulu kwilogicopoto ye-etoties. Kwinqanaba lolawulo lwedatha, ukugcinwa kunye nokutshintshiselana kunqongophele kakhulu; Awunakuba nombukeli osebenzayo kunye ne-applet ephuhliswe eJava apho ikhupha khona ukufakwa kwedatha ye-vector ngendlela engenamandla. Ngaphandle kokusikelwa umda, ngaphaya kwelizwe lakhe lokuzalwa (iSwitzerland), i-OCAD ikwazile ukufikelela ngaphezu kwamazwe e-60.
Ngokuqinisekileyo i-OCAD ayisayi kuba ngumthunzi wento engenziwa ngoku nge-gvSIG, ukuba sijonga imigangatho ye-OGC, iklayenti ye-IDE, isicelo seWindows Mobile kunye ne-Android, njl. Kodwa ngokuqinisekileyo yisoftware ekufuneka uyihloniphile ngokwaneleyo ngomsebenzi wakho, kwaye ukuba ufuna ukwenza iimephu ngeenjongo zokushicilela ... ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ucinge nzulu.
Bona ngaphezulu kwe-OCAD
Post edlulileyo«Edlulileyo Indlela yokufaka imifanekiso yendawo kwiGoogle Earth
Post Next Ukusetyenziswa okusebenzayo kweemifanekiso zembali zeGoogle zomhlabaOkulandelayo "